Okpukpe Afrịka - Mbog Bassong (Akwụkwọ) - AFRIKHEPRI
Lelee onye nlekọta nyocha (2005)
Ayi ahuwo na ngpeacha nke isi nke 3 na Iso nke Kraist neche site n'echiche nke oge Pharaoh nke kachasi nma. Echiche nke ọmụmụ nke "Mmụọ Nsọ", nke "atọ n'ime", nke "onye nzọpụta" nke ụwa, nke "mbilite n'ọnwụ", ọbụna akara ụfọdụ, dịka okpukpuchi nke igwe n'elu isi Kraịst, na-abịa n'okpuru Sun na-efe ofufe na nnukwu physics (ihe) ndị Kamit na-enyocha kpakpando. Site ugbu a gaa n'ihu, anyị ga-atụle na ebe nsọ "animists" na-agba akara nke ebe nsọ ndị a raara nye nchịkọta ihe omimi nke ihe ọmụma ha dịzi.
Enwere ike ịhụ na chọọchị Roman ahụ weghaara ụfọdụ akwụkwọ Kamit ndị toro eto site n'inye ha Jizọs Kraịst mgbe ha nyesịrị ha nlezianya. O nweghi oge na ndidi iji mụta ma ghọta ihe dị mkpa ha na njikọta sayensị nke Eluigwe na Ala. Ma n'ihi na ọ bụ otú ahụ, anyị nwere ike ịgbaghara.
Anyị aghaghị ọbụna ịgbaghara n'ihi na ọ bụ iwu ahụ. N'ezie, n'ókè nke ọdịbendị ụmụ mmadụ, anyị na-arụ ọrụ nkeOsiris (mmalite), mgbe ahụ nke nwa ya Horus (ọganihu nke mgbasawanye nke ndụ nke akụkọ ọdịnala na ememe Africa). Site na nke a, ụwa Nordic (Western na Arab) na-arụ ọrụ Seth ala ịkpa. Site n'itinye Afrika ka ọ bụrụ ohu na n'okpuru ọchịchị ndị ọchịchị, ụwa a dị n'ebe ugwu emeela ka ịkpọasị Osirian kwụsị Seth na mmeri nke ike. N'ezie, ebumpụta ụwa ya na ọdịiche ya bụ ihe okike, ma nke Asia, nke eme na yang, na-enweta ihe ọzọ site na nsụgharị ternary nke ụwa na ụwa Nordic.
Le eme na yang mee ihe, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ihe dị mkpa maâtiste n'etiti ụwa abụọ mbụ; ọ bụ ya mere o ji mee ka ọ kọọ akụkọ abụọ nke mbụ, ma ọ bụ ime ihe ike ma ọ bụ udo. Na agbụrụ ya na ike, ọ ga-eme ka ndị West merie emeri, kwadebekwa, ọ ghaghị ịbịbịa ụwa zuru ụwa ọnụ nke ga-eme ka ụwa Kamit na Africa laghachi azụ n'ihu ụwa. Ka anyị were okwu nke Akwụkwọ mbata na ìhè nke ụbọchị nke oge Pharaoh, bụ onye a kpọrọ Akwụkwọ nke Ndị Nwụrụ Anwụ ; okwu ndị Jizọs Kraịst mere amara:
"I nwere ike ịga! Anyị na-agbaghara gị mmehie gị nile, wepụkwa mmehie gị. "
Nke ahụ bụ ihe anyị na-ekwu. Ọ ghaghị ịghọta na ọ bụrụ na Iso Ụzọ Kraịst nọgidere bụrụ ihe ezi uche dị na ya nke meriri West, ọ na-enweta nnukwu akụkụ site na "ịchọrọ" nke ndị Cartesian na ịhapụ ihe ọmụma. Nke a bụ ihe na-eme ka ihe dị mkpa: "ọ bụ ya ma ọ bụ na ọ bụghị ya". Anyị bụ ndị kwesịrị ntụkwasị obi ma ọ bụ ndị na-ekwesịghị ntụkwasị obi. Ọ na-eme ka ụwa dị mgbagwoju anya, na-ekewa ekewa ruo mgbe ebighi ebi n'enweghị olileanya nke "ọ ga-abụ nke a ma ọ bụ nke ahụ, ma ọ bụ ma n'otu ugbua", ịnakwere echiche ndị ọzọ ka e ji mara Tandary echiche nke Kamit. A na-eji ememe ndị na-adịgide adịgide ma malite n'oge ahụ iji weghachite mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọbụna ịtụ anya ngosipụta nke nsogbu ahụ.
Di iche iche bu iwu nke ndu. Ihe ndi ozo di iche iche, akwukwo nri na umu anumanu di iche iche na - esonye na nkwekorita nke uwa nile, onye obula na - achikota onwe ya na ibe ya iji kwado ya. Ya mere ndi mmadu enweghi ike ime ka ha di na ndi ozo. Ma ndị nke Nordic ejirila ohu Kamit gbaa ohu ma chịwa ha. Ọbụna ihe ọzọ: ha na-eche na ụwa dị na okpukpe nke okpukpe ha, naanị echiche ha, nanị echiche ha, naanị ihe ha chọrọ.
Ọ bụrụ na Africa natara mmetụta nile nke okpukpe mba ọzọ n'emeghị ka ha daa, ọ bụ n'ihi ntanary paramọrụ a na-emeghe ụwa. Ma Afrika enwebeghị akwụkwọ ndị dị "nsọ" na nkịta. Ihe ndị kpatara ya dị mfe: ụzọ ndụ ya na ikere òkè ya, agbadoro agbụrụ ndị òtù nke Okwu na Eziokwu na-agbagharị, emeela ka ndị mmadụ nweta obi ụtọ na ọganihu Chineke. Ụlọ ọrụ ndị ahụ dịgidere n'eziokwu a nke Chineke na Chineke; n'eziokwu, ndị Africa anọwo na-atụle akụkụ Akwụkwọ Nsọ "e dere ede" ma gbanwee "eziokwu" n'oge. Omenala anọgidewo na-arụ ọrụ ma na-ede ihe n'ozuzu n'aka ndị bidoro na-arụkwa ọrụ ndị odeakwụkwọ.
Taa, anyị nwere ike tụọ aro nke "dogmas" nke okwukwe na nzukọ nke mgbukpọ e dere na akụkọ ihe mere eme mmadụ.
A pụghị ịmị Mesaịa na ndị amụma n'Africa, ma naanị ha ga-akpọsara "ozi" ha. "Ndị ozi" a nke Chineke malitere inwe ihe ha ga - ekwu n'ụbọchị ndị ahụ na - ebuso ndị mmadụ agha na - ekwu okwu ọjọọ, ịgba ohu, ọchịchị, ịda ogbenye, ikpe na - ezighị ezi na ezighi ezi dị ka ụdị nke ịbụ. Na ime nke a, ha ebibila omenala ọdịnala site na ịtọ ndị Kraịst na Islam na-ekweghị n'okike, kamakwa ụdị nke ha na aha ndị a na-akpọ ụwa. Ọ bụrụ na anyị ekwenye na anyị ga-azọpụta ụwa site n'aka mmadụ, anyị aghaghị ịlaghachi na ụlọ ọrụ ndị a n'Africa na ọdịnala ha. Ndị gụrụ isi nke mbụ ga-eso nkwupụta a site n'aka Jean Ziegler:
"African cosmogony kwuru na ọ dịghị ihe na-emetụta nchebe, njigide, mgbasawanye nke ndụ."
N'ọgbọ ọdịnala nke ndụ n'Africa, a kwusaghị ịhụnanya nke onye agbata obi ya, ma ọ bụ na-ebi ndụ kwa ụbọchị site na ihe nlereanya nke nzukọ nke nwere ihe ùgwù na ihe ùgwù, ma taa, ntụziaka nke òkè na nkwado na karịsịa , ngwakọta nke mgbalị maka mmezu nke ọrụ Chineke, bụ iwu nke Eluigwe na Ala dịka valeur n'anya mmadụ niile. Na ọnọdụ ndị a nke obi ụtọ, ọ dị ngwa iji chefuo Chineke. Nloghachi a na-eme ka ihe dị ebube nke ofufe ya dị iche iche nwere ihe jikọrọ ya na ọtụtụ nhụsianya ndị okpukpe na ndị mmadụ na-eme.
N'ezie, ọrụ ubi, ịchụ nta, ịkụ azụ, ụlọ obibi, alụmdi na nwunye, ntinye aka n'ìgwè dị iche iche, agụmakwụkwọ, niile kwetara na ọ dị mkpa ka e nye iwu, inyekọrịta aka na ịchọta ihe. nke ịdị adị. Enwere ịhụnanya maka ndị agbata obi nke karịrị nke ahụ? Ọ dịghị ndị ọzọ nọ n'ụwa a nke ụmụ mmadụ mepụtara ụdị ndị mmadụ, ka ịhụnanya na ọrụ ebere, dị ka okwu okpukpe nke ịkekọrịta, apụtawo n'ọtụtụ ụzọ, dị nnọọ mkpa.
Na mmụọ nke ndị maara ihe na ndị ebido, onye ọ bụla bụ onye ọ bụla na onye ọ bụla. Nke a mere ka e nwee uche dị elu ma nwee nchịkọta zuru oke: ọ dịghị adị njọ, enweghị mmehie mbụ, enweghị ikpe ọmụma, ịkpọasị, enweghị nsogbu, enweghị atụmanya nke onye amụma ma ọ bụ onye Messiah onye azọrọ na ha natara n'aka Chineke "iwu Chineke". Ndị amụma nke akụkọ ihe mere eme, Moses, Jesus, Mohammed, Buddha, Negro-Afrika ma ọ bụ Negro-African Afrika hụrụ ozi ọma nke ịhụnanya ha na-enwe ọganihu n'ebe ọzọ karịa n'Africa.
Ya mere, n'ime ndi mmadu na-adighi nma, ndi na-emewanye ihe na ndi na-eme ihe ike bu ndi ozi ha huru n'anya, nke di iche site na nmalite, ndi ndi ha kwesiri ntukwasi obi na ndi ha huru n'anya nuru ha, tupu ha enwee obi uto site na nzisaghari n'okpukpu agha. A ghaghị ịzụta ego ọ bụla. "Okwukwe" nwere anya nke anyaukwu, ihe ùgwù, nduzi, lucre, ịgba ohu, ọbara mmadụ.
Ekpere niile bụ ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na enweghị njikọ na mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ịkekọrịta na izi ezi. Na nke a, Africa na-enwe ogo nke zuru okè nke ụlọ ọrụ ndị ọ na-adịtụghị ka ndị ọzọ. O nweghị ihe ọ bụla na-enweghị ike ịmechi ememe ndị a na ndị nchụàjà na-echebe ha. Anyị aghaghị ịlaghachi ma gbanwee ugwu ha na ebe nsọ ha nke ụka na-anọ na ya, na ime nke a, meziwanye ọnọdụ ndụ ha. Nke a bụ naanị ọnọdụ a ga - enwe ike ịlụ ọgụ megide mgbasawanye na agha nke okpukpere chi nke okwukwe. Site na echiche a, onye ntorobịa aghaghị ịbịarukwu ndị maara ihe nso ma malite.
Na ihu ihe a niile, ka anyị ghara iche na ihe niile furu efu. Omenala Afrika ekwughị okwu ikpeazụ ya. A ga-eji okpukpu nke "okwukwe" na-amụghachi okpukpe ya, ọ ga-enyekwa ìhè nke nwa amaala ụwa nke ọdịmma mmadụ ya na ụlọ ọrụ ya, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba ya.
Site n'akwụkwọ LA RELIGION AFRICAINE -Kiyikaat Editions
Site na Mbog Bassong
Nwanyị B - Maya Angelou